आज जेठ १९ मै खुल्यो ‘रहस्यमय’ दरबार हत्याकाण्डको यस्तो नयाँ तथ्य ! « Online Tv Nepal
आज जेठ १९ मै खुल्यो ‘रहस्यमय’ दरबार हत्याकाण्डको यस्तो नयाँ तथ्य !
Published :2June, 2018 3:41 pm
काठमाडौ । नेपालको इतिहासमा कालरात्रिका रूपमा चर्चित दरबार हत्याकाण्ड भएको १७ वर्ष बिते पनि त्यससँग जोडिएका थुप्रै घटनाक्रम ‘रहस्यमय’ नै छन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यलगायत राजपरिवारका १० सदस्यले ज्यान गुमाउनुपरेको त्यो घटना हुनुमा पर्दाअगाडि र पछाडि ककस्को भूमिका थियो रु कस्को उक्साहटमा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र आफ्नै परिवारमाथि गोली प्रहार गर्ने निचोडमा पुगे ?
दीपेन्द्रले आत्महत्या गरेकै हुन् त ? दीपेन्द्रको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो थियो ? फायरिङ चल्दा त्यहाँ उपस्थित अङ्गरक्षक सैनिकहरूले नियन्त्रणको प्रयास किन गरेनन् ? लगायतका जिज्ञाशा अझै ज्यूँका त्यूँ छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले हत्याकाण्डको रहस्यका बारेमा पुनः अनुसन्धान गर्ने घोषणा गर्नु भए पनि अनुसन्धानको फाइल खोल्ने प्रयास कसैबाट हुनसकेको छैन । घटना छानबिन गर्न गठित समितिको निचोडप्रति इतिहासका प्राध्यापक पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूले यस घटनालाई ‘रहस्यमय’ विश्लेषण र अध्यापन गर्दै आएका छन् ।
इतिहासविद् प्रा. डा. विजयकुमार मानन्धरले १७० वर्ष बित्दा पनि गगनसिंहका हत्यारा प्रमाणित गर्न नसकिए जस्तै दरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएका धेरै पाटा रहस्यकै गर्भमा रहेको बताउनुभयो । “कस्को ‘इन्ट्रेस्ट’मा कसरी हत्याकाण्ड रचियो भन्नेलगायतका कुरा अझै खुल्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन आयो तर त्यसलाई अन्तिम मान्न सकिन्न । हतारमा प्रतिवेदन बन्यो । घटनासँग जोडिएका पात्रहरूको बयानको सङ्गालोलाई प्रतिवेदनको रूप दिइयो ।
अनुसन्धान भएकै थिएन । अब परिस्थिति फरक भइसकेकाले प्रत्यक्षदर्शीहरू खुलस्त हुनसक्छन् । त्यसैले फेरि अनुसन्धान भई उद्घाटित नयाँ तथ्यको इतिहास लेखिनुपर्दछ । ”घटना भएको स्थल त्रिभुवन सदनलाई २०६१ सालमा भत्काइ पाताल बनाइएको थियो । अहिले पुनः त्यसलाई साविककै रूप दिन निर्माणकार्य भइरहेको छ । त्रिभुवन सदनका सामग्री केही सुरक्षित छन् भने कतिपय कहाँ पु¥याइए लेखाजोखा छैन । हत्याकाण्डमा प्रयोग भएको हतियार नेपाली सेनासँग सुरक्षित छ । दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी पुस्तक लेख्नुभएका इतिहासविद् प्रा।डा। राजकुमार पोखरेलले घटनास्थल नष्ट गर्नुलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
“राजा वीरेन्द्रको देशभक्तिपूर्ण अडानका कारण यो घटना मुख्यतः बाह्य शक्तिको ‘डिजाइन’मा भएको थियो” उहाँले दाबी गर्नुभयो, “त्यस बखत दीपेन्द्रका पाँचवटा ‘डमी’ बनाइएका थिए । त्यसैले गोली चलाउने व्यक्ति दीपेन्द्र हुनै सक्दैनन् र उनले आत्महत्या गरे भन्ने पनि विश्वास गर्न सकिन्न । यो काण्डको पुनः छानबिन हुनुपर्छ । ”
राजा वीरेन्द्रका तत्कालीन पाश्र्ववर्ती टीका धमलाले “उहाँ ९दीपेन्द्र० ले नै गोली पड्काइबक्सिएको हो । प्रायोजित रूपमा कसैबाट गराइएको भन्नेमा मलाई विश्वास छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस बखत दीपेन्द्रमा आसुरी प्रवृत्ति हावी भयो । हाम्रो समाजमा पनि छोराले बञ्चरो हानेर बाबुको ज्यान लिएका घटना सुन्ने गरेकै हौँ । ”
उहाँले राजाको हत्या गर्न युवराजलाई बाह्य शक्तिले कसरी प्रयोग गर्न सम्भव छ रु भन्ने तर्क गर्दै भन्नुभयो, “वीरेन्द्रलाई मार्न चाहनेहरूले अन्य उपाय गरी वा अरु कसैलाई प्रयोग गरी मार्न सक्थे तर छोरालाई प्रयोग गरी मार्न लगाए भन्ने कुरा कसरी सम्भव हुनसक्छ ? यो प्रायोजित हल्ला मात्र हो । ”
२०५८ साल जेठ १९ गते राति सवा नौ बजे घटना भएको थियो र मृतक तथा घाइते राजपरिवारका सदस्यलाई छाउनी अस्पतालसम्म लैजान दीपेन्द्रले सोही दिन अपराह्न प्रयोग गरेको टोयोटा ल्यान्डक्रुजरलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । सोही तिथिका दिन उहाँहरूको सामूहिक श्राद्ध निर्मल निवासमा गरिँदै आएको छ भने सुसारेहरूले पशुपतिनाथमा श्राद्ध गर्ने गरेका छन् ।
बिलियार्ड टेबुलको चाहना भत्काइएको त्रिभुवन सदनको जगबाट गाह्रो उठाइएको छ । प्लास्टरको काम सकिएको छ भने अब झ्यालढोका र छाना हाल्न बाँकी छ । हत्याकाण्डपछि रानी ऐश्वर्यको जुत्ता त्रिभुवन सदनभित्रको बिलियार्ड हलमा भेटिएको थियो भने शव दीपेन्द्र निवासको भ¥याङमा फेला परेको थियो । त्रिभुवन सदनभित्रका सोफा, टेबुल, चित्रलगायत वस्तुको अत्तोपत्तो छैन । बिलियार्ड टेबुल निर्मल निवासमा पु¥याइएको छ । अवलोकनका लागि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय पुग्नेहरू अधिकांशले बिलियार्ड टेबुल हेर्ने इच्छा व्यक्त गर्ने गरेको सङ्ग्रहालयका कर्मचारी सुनाउँछन् ।
श्रीपेच खुला भएन नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेट कार्यक्रममा श्रीपेच हेर्न पाउने सर्वसाधारणले योजना अगाडि सारे पनि अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । हालसम्म सैलुन कक्षमा श्रीपेचलाई बन्द गरी राखिएको छ । सुर्खेत कक्षमा श्रीपेच राख्नका लागि बुलेट प्रुफ सिसासहितको फ्रेम तयार भइसकेको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय प्रमुख रोहित ढुङ्गानाले सुरक्षा उपकरण जडानसम्बन्धी कार्यमा समस्या देखिएकाले श्रीपेचलाई सार्वजनिक गर्न केही समय लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।
श्रीसदन खुलेन गत वर्षको भूकम्पका कारण राजा वीरेन्द्रको निजी निवासका रूपमा रहेको श्रीसदन अवलोकनका लागि खुला गर्ने योजना तुहिन पुगेको थियो । नारायणहिटी दरबारको १९ कक्ष खुला भए पनि अझै १२ वटा कक्ष बन्द छन् । इलाम, सिरहा, रूपन्देही, कपिलवस्तुलगायत कक्ष बन्द छन् । इलाम कक्ष राजा वीरेन्द्रको गोप्य कक्ष थियो । २०४६ सालमा नेताहरूसँग वार्ता गरिएको र २०६५ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाल सरकारलाई श्रीपेच हस्तान्तरण गरेको मङ्गल सदन पनि खुला गरिएको छैन । मङ्गल सदनमा राजा वीरेन्द्रको निजी कार्यालय थियो । तिनलाई खुला गर्न योजना बनाइँदै गरिएको सङ्ग्रहालय प्रमुख ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
२१ लाख दर्शक नारायहिटी दरबार सङ्ग्रहालय उत्तिकै आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ । २०६५ साल फागुन १६ गते खुला गरिएपछि गत वैशाखसम्ममा २१ लाख छ हजार ५७३ दर्शकले अवलोकन गरिसकेका छन् । सङ्ग्रहालय हेर्न दैनिक एक हजारदेखि एक हजार दुई सय अवलोकनकर्ता पुग्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीहरूको सन्देश
दरबार सङ्ग्रहालय हेर्न हालसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विभिन्न मन्त्री, नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत पुग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आगन्तुक पुस्तिकामा “आज नारायणहिटी राजदरबारको अवलोकन गर्ने मौका मिल्यो । यस इतिहास लुकेको भवनलाई आगामी पुस्ताको अध्ययन र अनुभवको लागि राम्ररी संरक्षण गरिनु जरुरी छ । सङ्ग्रहालयको रूपमा यसको संरक्षण आवश्यक छ । संरक्षण जस्ताको तस्तै हालतमा गरिनुपर्दछ ।
यसको संरक्षणमा योगदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद”, लेख्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले “राम्रो संरक्षण र उपयुक्त सम्भार गर्नु आवश्यक छ”, भनी पुस्तिकामा लेख्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले “यो दरबार नेपाल र नेपालीको अत्यन्त महìवपूर्ण धरोहर हो । राष्ट्रिय साँस्कृतिक सम्पदा हो । यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न हामीले उच्च महìव र प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यसलाई सधैँ जीवन्त राख्नु हाम्रो चुनौती हो”, भनी लेख्नुभएको छ ।
मुमाको एकान्तवास हत्याकाण्डपछि मुमाबडामहारानी रत्नको एकान्तवास भएको छ । यस अवधिमा उहाँ मुस्किलले चार पटक दरबारबाहिर निस्किएको सुसारेहरू बताउँछन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नर्भिक अस्पतालमा भर्ना हुँदा उहाँ अन्तिम पटक दरबारबाहिर निस्किनुभएको थियो । राजा महेन्द्रको निजी निवास महेन्द्र मन्जिलमा रहँदै आउनुभएका उहाँ बिहान एक छाक भात र राति दूध तथा फलफूल सेवन गर्नुहुन्छ । ८८ वर्षीया रत्नलाई आफूसाथ लैजान धेरै पटक ज्ञानेन्द्र आउनुभए पनि उहाँ मान्नु भएन । नागरिकता नभएका कारण उहाँका नाममा टेलिफोन, विद्युत् र खानेपानीको लाइन जडान हुनसकेको छैन ।
अर्बौंको सम्पत्ति राजा वीरेन्द्र तथा उहाँका राजपरिवारका नाममा हालसम्म १२ जिल्लामा २१ हजार छ सय रोपनी जग्गा फेला परेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पत्तिबाट भाडावापत वार्षिक आठ करोड रुपियाँ आर्जन हुँदै आएको छ ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले हालसम्म ३७ करोड रुपियाँ बैङ्क मौज्दात, सवा दुई करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा, ७२ करोड रुपियाँ बराबरको सेयर रहेको जानकारी दिँदै रत्नचोक, हिमागृह, दियालो बङ्गलाबाहिरको जग्गा, बालाजु बाइपासको जग्गा, नुवाकोटमा लिची र आँपको बगैँचा तथा माछापोखरी भाडामा दिन सम्झौता गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।